मलाई ‘वेश्या’ बनाउने पुरुषको उपनाम के ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
उनको दैनिकी कुनै सम्पन्न परिवारको भन्दा कम थिएन। स्कुटरमा उनी यसरी सजिएर हिँडेको देखिन्थिन्, मानौं कुनै फिल्मको सुटिङमा जादै छिन् । सानैमा विहे गरेकी उनले एउटी छोरीलाई होस्टेलमा राखेकी हुनाले काठमाडौंमा डेरामा एक्लै बस्न थालेको पनि दुईचार वर्ष नै भइसकेको थियो। उनका बारेमा छिमेकीको आ–आफ्नो अनुमान थियो।
भने मेरो र छोरीको भविष्यको केही विकल्प छ राज्यसँग ? यति भन्दै उनी खाटको भित्ता तिर फर्केर रुँदै थिइन्। मसँग बोल्नका लागि कुनै शब्द थिएन।महिला खबरबाट